5G Circulator sy Magnet Isolator SmCo
Andriambola koba samarium
Magnet Concrete Precast
Magnet mifono vy
Magnety mifono plastika
Fiarovana & Solika & Gas
Indostria sy mandeha ho azy
Fanandratana & fihazonana
Trano sy birao ary kilalao
Fomba fampiasa taloha
Fironana vidin'ny vidin-javatra
Calculator ho an'ny fahasimban'ny fllux
Fomba tsy fahita firy eto an-tany
5G, ny teknolojia fifandraisan-davitra finday ho an'ny taranaka fahadimy dia taranaka vaovao amin'ny teknolojia fifandraisana an-tariby broadband miaraka amin'ny toetran'ny hafainganam-pandeha avo lenta, fanemorana ambany ary fifandraisana lehibe. Izy io dia ny fotodrafitrasa amin'ny tambajotra mba hahatsapa ny fifandraisan'ny masinin'olombelona sy ny zavatra.
Ny Internet amin'ny zavatra no tena mahazo tombony amin'ny 5G. Ny hery lehibe manosika ny 5G dia tsy ny fitomboan'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny tambajotra haingana kokoa, fa koa ny fiparitahan'ny fitaovana tambajotra amin'ny tontolon'ny indostria. Ireo indostria ireo dia miantehitra bebe kokoa amin'ny fitaovan'ny tambajotra hanangonana sy handinihana angon-drakitra, hahatonga ny fizotran'ny asa hahomby kokoa, hanatsara ny famokarana ary hanatsara hatrany ny vokatra sy serivisy. Ny 5G dia antenaina hanampy ny orinasa amin'ny fomba mahomby amin'ny fitantanana ny habetsaky ny fampahalalam-baovao ateraky ny Internet, ary hanatsara ny fandefasana hafatra eo noho eo ilaina amin'ny serivisy fanakianana toy ny robot na ny fitondrana fiara mitokana.
Circulator sy isolator dia iray amin'ireo fitaovana fototra an'ny tobin'ny base 5G. Ny rafi-pifandraisana finday iray manontolo dia mazàna amin'ny fotodrafitrasa fifandraisan-davitra, ny rafitra fandrakofana finday ary ny vokatra terminal fifindrana finday. Base station dia an'ny fitaovana fototra amin'ny fifandraisana finday. Ny rafitry ny tobin'ny base base dia mazàna amin'ny RF front-end, transceiver base station ary mpanara-maso ny base station. Ny front-end RF dia tompon'andraikitra amin'ny sivana famantarana sy ny fitokana-monina, ny transceiver base station dia tompon'andraikitra amin'ny fandraisana signal, fandefasana, fanamafisana ary fampihenana, ary ny mpanara-maso ny base station dia tompon'andraikitra amin'ny famakafakana famantarana, fanodinana ary fanaraha-maso ny base station. Ao amin'ny tamba-jotra fidirana tsy misy tariby, ny circulator dia ampiasaina indrindra hanokanana ny fambara famoahana sy ny fambara fampidirana ny tobin'ny tobim-piantsonana. Ho an'ny rindranasa manokana, ny Circulator dia afaka mahatratra ireto fiasa manaraka ireto amin'ny fitaovana hafa:
1. Azo ampiasaina ho antena mahazatra;
2. Miaraka amin'ny BPF miaraka amina fanamorana haingana, dia ampiasaina amin'ny fizarana fizarana onja;
3. Ny terminal resistor dia mifandray amin'ny ivelan'ny circulator ho isolator, izany hoe ny signal dia fidirana sy fivoahana avy amin'ny seranana voatondro;
4. Ampifandraiso ny ATT ivelany ary ampiasao ho toy ny circulator misy fiasa hita taratra amin'ny herinaratra.
Amin'ny maha iray amin'ireo singa ilaina indrindra, tapa-roa an'ny Andriamby kapila samarium Cobaltmanome ny sahan'andriamby ilaina amin'ny fitongilanana ny fihaonan'ny ferit. Noho ny toetoetran'ny fanoherana ny harafesina tsara sy ny fahamendrehana miasa hatramin'ny 350 ℃ degre, dia samy ampiasaina amin'ny andriamby na isolatera ny andriamby SmCo5 sy Sm2Co17.
Miaraka amin'ny fampiharana ny haitao MIMO 5G goavambe dia nitombo be ny fanjifana Circuits sy isolatera ary hahatratra 4G imbetsaka ny haben'ny tsena. Amin'ny vanim-potoana 5G, ny fitakiana fahaizan'ny tamba-jotra dia avo kokoa noho ny an'ny 4G. Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) dia iray amin'ireo teknolojia lehibe hanatsarana ny fahafahan'ny tambajotra. Mba hanohanana ity haitao ity dia hitombo be ny fantson'ny antena 5G ary hitombo ny isan'ny fantsona antena ho an'ny sehatra tokana avy amin'ny fantsona 4 ary fantsona 8 ao anatin'ny vanim-potoana 4G ka hatramin'ny fantsona 64. Ny fampitomboana avo roa heny ny fantsona koa dia hitarika fiakarana lehibe amin'ny tinady amin'ireo mpivezivezy mifanitsy aminy. Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny filan'ny maivana sy miniaturisation, apetraka ny fepetra vaovao momba ny habetsahana sy ny lanjany. Ankoatr'izay, noho ny fanatsarana ny tarika matetika, tsy dia tsara ny fidirana amin'ny signal ary lehibe ny atenuation, ary ny haavon'ny tobin'ny 5G dia ho avo kokoa noho ny 4G. Noho izany, amin'ny vanim-potoana 5G, hitombo be ny fampiasana mpampita sy mpanelanelana ary avy eo ny andriamby Samarium Cobalt.
Ireo mpanamboatra Circulator / isolator eto amin'izao tontolo izao no misy Skyworks any USA, SDP any Canada, TDK any Japan, HTD any China, sns.
Fotoana fandefasana: Jun-10-2021
128 # Lalan'i Buzheng Atsinanana, Zone Park Industrial Industrial Wangchun, Ningbo, Sina